Fampitovian-danja Ny Hafainganana Sy Ny Fahamarinam-Baovao Hisorohana Ny Vaovao Diso Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2014 11:51 GMT
Miankina amin'ny media sosialy isika amin'ny fitadiavam-baovao, saingy rehefa miely haingana dia haingana ny tsaho sy ny vaovao diso, dia mety hiteraka olana goavana izany, tahaka izay nitranga taorian'ny baomba nipoaka tamin'ny marathon tao Boston, na nandritra ny hetsika Lohataona Arabo koa taona vitsy lasa izay ary ny ady mitranga ao Syria amin'izao fotoana izao. Mba hahafantarana tsara izay zava-mitranga sy izay vaovao marina, dia tokony hanamarina aloha isika.
Checkdesk, dia tetikasa natombok'ilay fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola Meedan, ny fiadiana amin'ity olana (vaovao diso miparitaka) ity no tanjon'ny tetikasa. Niresaka tamin'i Dina El Hawary avy ao amin'ny Checkdesk ny Rising Voices vao haingana izay mba hahafantatra bebe kokoa mikasika ny tetikasa sy ny antony maha-zava-dehibe ny fanamarinam-baovao.
Hita ao amin'ny Github, sehatra fizarana rindrambaiko misokatra hoan'ny rehetra, ihany koa Checkdesk ary nomarihany tao amin'ny firotsahany hifaninana ao amin'ny Knight News Challenge vao haingana fa tanjon'izy ireo ny hahamora ny fikirakirana sy ny fizarana azy, singa amin'ny tetikasa ahafahana manatsara ny vokatra farany, hoy i El Hawary.
Al Masry Al Youm – Ejipta
Shabab Suria – Siria
Maan – Palestina
Nampiofana olo-tsotra mahaleotena sy olo-tsotra mpanoratra gazety mikasika ny fampiasana ny Checkdesk ao amin'ny manodidina azy ireo mpiara-miasa ireo mba hananganana vondron'olona afaka manampy amin'ny fanamarinam-baovao. Fanampin'izany, namolavola tetikasa fitaratra ao amin'ny Oniversite Amerikana Libaney ao Beirota izy ireo miampy fampianarana asa fanoratan-gazety fanadihadiana hampivelarana hatrany ny habaka – sy ny hanitarana ny tetikasa any amin'ny oniversite maro hafa, hanomanana taranaka mpanoratra gazety vaovao mahafantatra tsara ny maha-zava-dehibe ny fanamarinana ny zava-mitranga.
Noresahana vao haingana tao amin'ny Bokikelin'ny Fanamarinam-baovao navoaka vao haingana ihany koa ny Checkdesk, izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana tranga iray niarahana tamin'i Shahab Suria. Miara-miasa amin'ireo mpamoaka lahatsoratra ihany koa ny Checkdesk mba handika ilay bokikely ho boky elektronika (e-book) amin'ny teny Arabo ary voaaro amin'ny zon'ny mpamorona. Farany, nilaza izy ireo fa: « ny Checkdesk dia natokana hiresahana ny iray amin'ireo fanamby goavana momba ny famoaham-baovao amin'izao vanim-potoan'ny nomerika izao: ny fandanjalanjana ny hafangainana sy ny fahamarinan'ny tranga. »